Infegy Atlas: Azịza ọgụgụ isi sitere na Social Media | Martech Zone
Infegy Atlas: Azịza ọgụgụ isi sitere na Social Media
Fraịde, Jenụwarị 30, 2015 Wednesday, February 4, 2015 Douglas Karr
Na-efu ọtụtụ n'ime nnyocha m na-ele na ntanetị ọ bụ ọnọdụ nke ọnụọgụ enyere. Achọpụtara m na ọnụọgụgụ ahụ na-eduhie (mgbe ụfọdụ na ebumnuche) ma dabere na windo nke ọnọdụ dị mma ma ọ bụ ihe omume pụrụ iche. Agbanyeghị, a na-ekekọrịta ha. N'okwu a, enwere m obi ike na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ga-agwa gị na ha nwere nlọghachi kachasị mma na itinye ego.
Ọ gaghị ekwe omume mmadụ niile ịbụ ndị kacha mma… ma ihe dị mkpa, nke kacha mma bụ nke mmadụ. Ọnọdụ dị gburugburu ya nwere ike ịgụnye ogo ụlọ ọrụ, ọnụahịa nke ikikere, njirimara ndị ahịa nke na-ebuga ya n'elu kasị mma. N'oge na-adịbeghị anya, ahụrụ m ntụnyere nke sistemụ CMS nke akpọrọ kacha ewu ewu - mana ọ nweghị ihe ọ bụla metụtara ọdịnaya na ebumnuche nke ọdịnaya a na-ebipụta, ihe ndị dị n'ime ya iji mepụta na CMS, yana mgbanwe nke CMS gafee ndị na-ajụ ase. Ihe kachasị mma maka otu ụlọ ọrụ abụghị nke kachasị mma maka onye ọzọ - ọ bụ ya mere DK New Media abụrụla onye na-ere ihe na-atọ ụtọ kemgbe ọtụtụ afọ. N'iji onodu, anyi dakọtara na ulo oru na ihe kwesiri ekwesi.
Nke a bụ nnukwu vidiyo na-agwa okwu Atlas Infegy, a na-elekọta mmadụ nlekota oru n'elu ikpo okwu na nke ahụ tinye n'ọrụ iji nyere ụdị aka ime mkpebi ka mma na-adabere na ezigbo oge mkparịta ụka gafee mgbasa ozi. N'ihe atụ anyị dị n'elu, ọgụgụ isi mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike iweta mmebi nke ụlọ ọrụ ndị metụtara ụlọ ọrụ iji kwekọọ na ngwọta ha kwesịrị izere ma ọ bụ nwee mmasị na ya.
Infegy Atlas bụ usoro ọgụgụ isi nke ọha na eze mepụtara iji zaa ajụjụ site na ụzọ anọ dị mkpa:
nchọpụta - N'ịchịkọta ihe karịrị 100 data data data, Infegy Atlas na-ewepụta akụkọ na-akpaghị aka iji gwa gị ihe na-eme n'isiokwu gị, na-egosipụta isi ihe omume na oge, ma na-akọwa data ahụ, na-ewega gị karịa eserese na ozugbo ịza.
Comparison - Gbaa ihe isii dị iche iche n’otu oge, Infegy Atlas ga-enye gị nghọta zuru oke banyere etu ha si atụnyere, ihe mere ha ji dị iche, na ihe ha nwekọtara ọnụ. A na-enyocha ihe oriri na ngụkọta ọnụ, na-enye gị ozi ọhụrụ agaghị ekwe omume ịchọta naanị n'otu isiokwu.
Ọmụmụ asụsụ - Infegy Atlas na-akwado ya Infegy Asụsụ, enwe ike ịgụ ma kọwaa ederede karịa mmadụ karịa sọftụwia. Nkà na ụzụ a, nke mepụtara na Infegy ihe karịrị afọ asaa, nwere ike ịtụle asụsụ dị mgbagwoju anya, na-enye gị nyocha a pụrụ ịdabere na ya na nkọwa gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
data - Nchịkọta data gbasara ọha na eze kachasị na azụmaahịa ahụ, nke sitere na ọtụtụ ọwa, nke a na-ahụkarị iji gosipụta ọnụọgụ mmadụ niile, ma na-enyocha spam n'ụzọ siri ike iji hụ na nsonaazụ ziri ezi
Ndị a bụ ụzọ 10 nke enwere ike iji ozi a dịka ụlọ ọrụ:
Tags: atlas ọrịaInfegy Asụsụnchọpụta mmadụọgụgụ isi mmadụnyocha mgbasa ozi mmekọrịtaọgụgụ isi mgbasa oziasụsụ na-elekọta mmadụ na-asụ asụsụ
7 Usoro iji bulie ọdịnaya gị Okike
Nnukwu Nlekọta nlele maka ndị na-ere ahịa Email